काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले ८ महिना २० दिनको कार्यकाल पछि मन्त्री पदबाट रा�
काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले ८ महिना २० दिनको कार्यकाल पछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । आईतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी हुन् । उनले विदाई कार्यक्रमभरी आँखाबाटा आँसु झारिरहिन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले २२ जेठमा चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै नयाँ टिम सिफारिस गरेको थियो । तर मन्त्रीहरुले […]
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले एप मार्फत विभिन्न एयरलाइनको टिकट बुकिङमा २० प्रतिशत सम्म क्यास व्�
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले एप मार्फत विभिन्न एयरलाइनको टिकट बुकिङमा २० प्रतिशत सम्म क्यास व्याक दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले २०७९ आषाढ १२ गते देखि २०७९ आषाढ १८ गते सम्म लागू हुने गरी ल्याएको यस योजनामा बैंकका ग्राहकहरुले बैंकको एप प्रयोग गरी टिकट बुकिङ तथा खरिद गर्न सक्नेछन् । डिजिटल बैंकिङको अवधारणा […]
काठमाडौं । आईतबार मन्त्रिपरिषद हेरफेर भएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहर
काठमाडौं । आईतबार मन्त्रिपरिषद हेरफेर भएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु बाहिरिएसँग सोही मन्त्रालयको जिम्मा थप नयाँ व्यक्तिहरुलाई दिईएको हो । एकीकृत समाजवादीबाट नेताहरु जीवनराम श्रेष्ठ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, मेटमणि चौधरी शहरी विकास मन्त्री, शेरबहादुर कुँवर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री, भवानी खापुङ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र हीरा केसी […]
पर्यटन मन्त्री आलेको राजीनामा घोषणा, भन्छन्, मेरो कार्यकालमा धेरै राम्रा काम भए
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले आफ्नो स्वमूल्यांकनसँगै राजीना
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले आफ्नो स्वमूल्यांकनसँगै राजीनामाको घोषणा गरेका छन् । आईतबार साँझ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्री आलेले आफ्नो कार्यकालमा धेरै राम्रा काम भएको बताएका हुन् । उनले पशुपति क्षेत्रको विकास, सुन्दरता, विदेशमा चोरी भएर गएका मुर्तिहरुको फिर्ता, उड्डयन क्षेत्रलाई व्यवस्थितलगायतका कामहरु आफ्नो कार्यकालमा महत्वपुर्ण भएको बताए […]
काठमाडौ) । ज्योति विकास बैंकले बेसीशहर शाखाको औपचारिक उद्घाटन गरेको छ। बैंकिङ्ग पहुंच थप विस्तार गर्दै जनतामाझ पुर्याउने उद्देश्यका साथ नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। बेसीशहर नगरपालिका वडा नं ८, लम्जुङ्ग स्थित बेसीशहर शाखाको समुद्घाटन बेसीशहर नगरपालिकाका मेयर गुमान सिंह अर्याल र बैंकका संचालक नरेश राज आचार्यले संयुक्त रुपमा गरेको थियो । उद्घाटन समारोहमा बैंकका […]
काठमाडौँ ियुनाइटेड सिमेन्ट्सले महादेव खोला,लेलेका सरकारी तथा निजी विद्यालयमा अध्यनरत ७३ विद्या�
काठमाडौँ ियुनाइटेड सिमेन्ट्सले महादेव खोला,लेलेका सरकारी तथा निजी विद्यालयमा अध्यनरत ७३ विद्यार्थीलाई स्कुल ड्रेस वितरण गरेको छ। युनाइटेड सिमेन्ट्सको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत महादेव युवा क्लबका अधक्ष अर्जुन लामाको अधक्षतामा गरिएको सो कार्यक्रममा युनाइटेड सिमेन्ट्सका खानी प्रबन्धक हरि कुमार उप्रेतीले स्कुल ड्रेस वितरण गरेका हुन्। सो कार्यक्रममा एसएम रोडा ढुंगाको पनि योगदान रहेको थियो। युनाइटेड […]
पुँजी बजार र महंगीको बिषय संसदमा, महासंघ अध्यक्षले भने–व्यवसायीको अन्दोलन कसरी रोक्ने ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष एवं संसद एलपी सावाँ लिम्बुले पछिल्ल�
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष एवं संसद एलपी सावाँ लिम्बुले पछिल्लो समय सेयर बजार धारासयी हुनुका साथै उच्च रुपमा महंगी बढेको भन्दै संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आज संसदको विशेष समयमा बोल्दै अध्यक्ष लिम्बुले पछिल्लो समय उद्योग व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यसतर्फसमेत ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । ‘पुँजी बजारका […]
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले ‘ग्लोबल आइएमई स्वस्थ नारी पहल अभियान’ निशुल्क महिला स्वा�
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले ‘ग्लोबल आइएमई स्वस्थ नारी पहल अभियान’ निशुल्क महिला स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेको छ । कम्पनीले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न ६ स्थानमा निःशुल्क महिला स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेको हो । बैंकले पश्चिम रुकुमको मुसीकोट नगरपालिका–७ स्थित साँख स्वास्थ्य चौकी, सुर्खेतको विरेन्द्रनगर नगरपालिका–१६ स्थित सानीलेख स्वास्थ्य चौकी, बैतडीको पञ्चेश्वर […]
मन्त्री आलेले अध्यक्ष नेपाललाई बुझाए राजीनामा, साढे ५ बजे पत्रकार सम्मेलन
काठमाडौँ । पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्
काठमाडौँ । पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई राजीनामा पत्र बुझाएका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय मीनभवनमा पुगेर मन्त्री आलेले राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । राजीनामा बुझाएलगत्तै मन्त्री आलेले आफ्नो राजीनामाबारे थप जानकारी साँझ साढे बजे मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन बोलाएका छन् । शुक्रबारको पोलिटब्युरो बैठकमा पनि मन्त्री आलेले […]
काठमाडौं । लामो समयपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) परिसुचकमा उछाल आएको छ । करिव ३ महिनादेखि अपवा�
काठमाडौं । लामो समयपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) परिसुचकमा उछाल आएको छ । करिव ३ महिनादेखि अपवादबाहेक लगातार ओरालो लागिरहेको सेयर बजारमा आईतबार भने ९४.९२ अंक सहित हरियाली छाएको हो । लामो समयदेखि घट्न सुरु गरेको बजार वियरिस ट्रेन्टमा गएको थियो । तर पछिल्लो समयको घटाईले नेप्से क्रयास नै हुने संकेत गरेको लगानीकर्ताहरुले बताएका थिए । […]
काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्ष सकिन अब १९ दिनमात्र बाँकी छ । यो अवधिमा सरकारले आफ्नो लक्ष्यअनुसार २ ख�
काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्ष सकिन अब १९ दिनमात्र बाँकी छ । यो अवधिमा सरकारले आफ्नो लक्ष्यअनुसार २ खर्ब २२ अर्ब राजस्व उठाउनुपर्ने छ । तर, अहिलेको गति हेर्दा सरकार चालू आवको राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न असफल हुने देखिएको छ । हालसम्म सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन नसकेका कारण बाँकी रहेको छोटो अवधिमा लक्ष्य भेट्टाउन […]
वीरगञ्ज नाकाबाट निर्यातमा ७३ प्रतिशत वृद्धि, प्रशोधित तेल सबैभन्दा बढी
काठमाडौं । नेपालको मुख्य प्रवेशद्वार र देशकै प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्जलाई प्रयोग गरी भारत त�
काठमाडौं । नेपालको मुख्य प्रवेशद्वार र देशकै प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्जलाई प्रयोग गरी भारत तथा तेस्रो मुलुकतर्फ हुने नेपाली वस्तुको निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा नेपाली वस्तुको निर्यात ७३ प्रतिशतले बढेको हो ।आव २०७७-८७ को साउनदेखि जेठसम्मको ११ महिनामा रु ४४ अर्ब २४ करोड […]
श्रीलङ्कामा यो हप्ता इन्धन आएन, सरकारले गर्यो थप इन्धन कटौतीको घोषणा
काठमाडौं । श्रीलङ्काले इन्धनमा कटौती गर्ने जनाएको छ । श्रीलङ्काका लागि आयात भइ आएका डिजेल, पेट्रो
काठमाडौं । श्रीलङ्काले इन्धनमा कटौती गर्ने जनाएको छ । श्रीलङ्काका लागि आयात भइ आएका डिजेल, पेट्रोल र कच्चा तेल प्राप्त गर्न नसकेपछि उसले देशभित्रै इन्धन कटौती गरेको हो । सो कुराको जानकारी श्रीलङ्काली इन्धन तथा उर्जा मन्त्री कन्चन विजकेसरीले जानकारी दिएकी हुन् । यस हप्ताका लागि आएको इन्धन प्राप्त नभएपछि श्रीलङ्काले इन्धनमा कटौती गर्ने जनाएको […]
काठमाडौं । मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा पर्यटक बोक्ने सवारी साधनका लागि छुट्टै बसपार्क नहु
काठमाडौं । मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा पर्यटक बोक्ने सवारी साधनका लागि छुट्टै बसपार्क नहुँदा पर्यटकीय बस विभिन्न स्थानमा रहन बाध्य भएका छन् । मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको मुख्य आधारका रुपमा रहेको पर्यटकलाई बोक्ने सवारीसाधनका लागि छुट्टै बसपार्क नहुँदा बौद्ध, सोह्रखुट्टेलगायत सडकबाट पर्यटकीय बस देशका विभिन्न भागमा आवतजावत गर्दै आएका छन् । कोरोना महामारीबाट नराम्रोसँग थला परेको […]
के हामी आर्थिक मन्दीमा छौं ? सेयर बजार घट्नु मन्दीको प्रारम्भिक सूचक हो ?
काठमाडौं । विगतको आर्थिक मन्दीले देखाएको छ कि अर्थशास्त्रीहरूले हामीलाई आधिकारिक रूपमा बताउनुअ�
काठमाडौं । विगतको आर्थिक मन्दीले देखाएको छ कि अर्थशास्त्रीहरूले हामीलाई आधिकारिक रूपमा बताउनुअघि नै हामी पहिले नै मन्दीमा छौं । मन्दी भनेको अर्थतन्त्रमा ठूलो गिरावट हो जुन धेरै महिना टिक्न सक्छ । मन्दीको प्राविधिक परिभाषा भनेको कम्तिमा दुई चौथाइ नकारात्मक आर्थिक वृद्धि भएको अवधि हो, जुन समग्र घरेलु उत्पादन (जीडीपी) द्वारा प्रतिबिम्बित हुन्छ र सामान्यतया […]
कर घटाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन गठबन्धनको सरकारलाई निर्देशन, मन्त्री बडुले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शनिबा
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शनिबार बिहान बसेको बैठकमा आजै मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएर पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउदै आएको कर कम गर्ने र आयल निगमलाई मूल्य घटाउन निर्देशन दिने सहमति भएको हो । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा गठबन्धनका संयोजक एंव कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आम नागरिकको […]
मालवाहक रेल चलाउन उद्योगी व्यवसायीको माग, मालवाहक रेल सेवा घाटामा नजाने दाबी
काठमाडौं । जयनगर–कुर्था रेल मार्गमा नियमित मालवाहक रेल सेवा सञ्चालन गर्न पाँच जिल्लाका उद्योगी �
काठमाडौं । जयनगर–कुर्था रेल मार्गमा नियमित मालवाहक रेल सेवा सञ्चालन गर्न पाँच जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन् । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीसँगको छलफलका क्रममा मधेस प्रदेशअन्तर्गत सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका उद्योगी व्यवसायीले मालवाहक रेल सेवा सञ्चालन गर्न माग गरेका हुन् । हाल जयनगर–कुर्था रेल मार्गमा सञ्चालन भइरहेको रेल सेवासँगै मालवाहक रेल […]
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने सरकारको निर्णय, पेट्रोलमा २० र डिजलमा २८ घट्यो
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिले�
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुले पेट्रोलमा २० रुपैयाँ र डिजेलमा २८ रुपैयाँ घटाएको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार पेट्रोलमा १९९ बाट घटाएर १७९ रुपैया कायम गरिएको छ भने डिजेल मट्टीतेलमा २८ रुपैया घटाइएको छ । अब डिजेल(मट्टीतेल १६३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । […]
सरकारले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, विद्युतीय चुल्हो र विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रोत्साहन
काठमाडौं । सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रण र खाद्यवस्तुको अभाव हुन नदिन प्रभावकार
काठमाडौं । सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रण र खाद्यवस्तुको अभाव हुन नदिन प्रभावकारी अनुगमन गर्ने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले शनिबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी दिएका हुन् । उद्योगमन्त्री बडूले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई मूल्य नियन्त्रण गरिने विश्वास व्यक्त गरे […]
मिटर ब्याज, वैदेशिक रोजगारदेखि चिठ्ठा परेको भन्दै बढ्यो ठगी, सचेत हुन सिआइवीको अनुरोध
प्रहरीले पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी प्रलोभन दिएर ठगी गर्ने कार्�
प्रहरीले पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी प्रलोभन दिएर ठगी गर्ने कार्य बढिरहेको भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुन नागरिकमा अनुरोध गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइवी)ले सूचना जारी गरी त्यस्ता गतिविधि भइरहेको जानकारी आएमा सूचना दिनसमेत अनुरेध गरेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा अवैध ऋण लगानी (मिटर ब्याज) गरी दिएको […]
गण्डकीमा बैंक अफ काठमाण्डुको घरदैलो कार्यक्रम, नयाँ योजनाको प्रचार
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डुका गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न शाखा कार्यालयहरुले घरदैलो कार्�
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डुका गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न शाखा कार्यालयहरुले घरदैलो कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् । बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको २ निक्षेप योजनाहरुको जानकारी मुलक तथा विभिन्न बैंकिङ सेवाहरुको जानकारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले संचालन गरीएको उक्त घरदैलो कार्यक्रममा बैंकका विभिन्न शाखा कार्यालयका कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो । बैंकले आकर्षक विशेषताहरु सहित ४ गुणासम्मको प्रतिफल […]
काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट २५ अर्ब ४१ करोडको, ४९ प्रतिशत खर्च पूर्वाधारमा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजा रुपैयाँ
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजा रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार नगरसभामा उपमेयर सुनिता डंगोलले उक्त बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले महानगरपालिकाले कार्यालय खर्चका लागि मात्रै कुल बजेटको २० प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको बताईन् । उनका अुनसार महानगरले पूर्वाधार […]
‘एस्ट्रोपड’ डेटिङ एप मेड इन स्टार्स सार्वजनिक, ग्रह मिलेका आधारमा जोडी पत्ता लगाउन सकिने
काठमाडौं । अमेरिकामा आधारित नेपाली प्रविधि कम्पनी एस्ट्रो वेद प्रालिले नेपालमा पहिलो पटक डेटिङ �
काठमाडौं । अमेरिकामा आधारित नेपाली प्रविधि कम्पनी एस्ट्रो वेद प्रालिले नेपालमा पहिलो पटक डेटिङ एप ‘एस्ट्रोपड’ सार्वजनिक गरेको छ। नेपालमा भरपर्दो डेटिङ एपको उपस्थिति नभएको अवस्थामा प्रयोगकर्तालाई आफ्नो मन मिल्ने जोडी खोज्न सहयोग पुर्याउने हिसाबले आज आषाढ १० गते शुक्रबार कम्पनीले लाजिम्पाटको र्याडिसन होटलमा एप सार्वजनिक गरेको हो। एस्ट्रो पडको नारा ‘मेड इन स्टार्स’ राखिएको […]
पेट्रोलियम कर ५० प्रतिशतले घटाउन प्रतिनिधिसभा उपसमितिको निर्देशन, घट्ला मूल्य ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पेट्रोलियम पद
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करमध्ये ५० प्रतिशत घटाउने निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार प्रकाश रसाईलीको संयोजकत्वमा बसेको बजार अनुगमन उपसमितिको बैठकले सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको हो । पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य अचाक्ली बढेपनि यसले उपभोक्तालाई सास्ती भएको र सरकारले यसमा ध्यान दिँदै कर […]
प्रतिबन्धित तास : जेठमै साढे ८६ लाखको आयात, बैशाखमा भन्दा चार लाख प्याकेट बढी
काठमाडौं । सरकारले विलासिताको वस्तु भन्दै प्रतिबन्धको सूचीमा राखेको तासको आयात जैठमै सबैभन्दा उ
काठमाडौं । सरकारले विलासिताको वस्तु भन्दै प्रतिबन्धको सूचीमा राखेको तासको आयात जैठमै सबैभन्दा उच्च देखिन्छ । गत बैशाख १३ गते सरकारले तासलगायत १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपनि त्यसपछि भने झन धेरै तास आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । विभागको तथ्यांक अनुसार जेठ महिनामा मात्रै ८६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको ४ लाख ४७ हजार […]
७५३ स्थानीय तहले आज बजेट सार्वजनिक गर्दै, यसरी व्यवस्थापन गर्नेछन स्रोत
काठमाडौं । आज सबै ७५३ स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्द
काठमाडौं । आज सबै ७५३ स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोत प्रयोग गरी बजेट बनाएका छन् । १५ जेठमा संघीय सरकारले ल्याएको बजेटबाट गएको चार […]
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले भाटभटेनी, धनगढीमा किनमेल गरी इएनएमबी ९ओम्नि च्यानल०, भिसा डेबिट र क्रेडि
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले भाटभटेनी, धनगढीमा किनमेल गरी इएनएमबी ९ओम्नि च्यानल०, भिसा डेबिट र क्रेडिट कार्डहरू मार्फत भुक्तानी गर्दा एनएमबि बैंकका ग्राहकहरूले १० प्रतिशत वा ५ सय क्यासब्याक पाउने गरी साझेदारी गरिएको छ । यो योजना २६ जुन, २०२२ देखि सिमित अवधिको लागी प्रदेश ७ को धनगढी भाटभटेनीमा सञ्चालन हुँदैछ । एनएमबि बैंकले ग्राहकहरुलाई डिजिटल […]
सिटिजन्स बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा उदयपुरको तोरीबारीमा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशका विभिन्न दुर्गम स्थलका बासिन्दाहरुलाई सर्व�
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशका विभिन्न दुर्गम स्थलका बासिन्दाहरुलाई सर्वसुलभ तथा अत्याधुनिक बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा विस्तार गरेको छ । यसै क्रममा बैंकले उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका– ०७ तोरीबारीमा यहि आषाढ ०६, गतेबाट ९५ औं शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा प्रारम्भ गरेको छ । सो स्थानमा सेवा संचालनका लागि स्थानीय […]
समयमै लेखापरिक्षण नबुझाउने २२ कम्पनीलाई बीमा समितिको कारबाही, २०७६/७७ को समेत बुझाएनन् प्रतिवेदन
काठमाडौं । बीमा समितिले विभिन्न २२ बीमा कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । समितिले बिहीबार एक सूचना जार�
काठमाडौं । बीमा समितिले विभिन्न २२ बीमा कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । समितिले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै समयमै लेखापरीक्षण नबुझाउने जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा गरी २२ कम्पनीलाई कारवाही स्वरुप जरिवाना तोकेको हो । यसअघि समितिको निर्देशन बमोजिम समयमै लेखापरिक्षण नबुझाएको भन्दै उक्त कम्पनीहरुलाई १० हजारका दरले जरिवाना तोकसकेको थियो । सोही कम्पनीमध्ये कसैले पुनः […]
आइएमई पे को ‘क्यूआर डे विथ आइएमई पे’ १ दिने अफर सार्वजनिक, क्युआर स्क्यान गरी सामान खरिद गर्दा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । आइएमई पे ले आफ्ना प्रयोगकर्ता माझ १ दिने अफर सार्वजनिक गरेको छ । ‘क्यूआर डे विथ आइएमई पे
काठमाडौं । आइएमई पे ले आफ्ना प्रयोगकर्ता माझ १ दिने अफर सार्वजनिक गरेको छ । ‘क्यूआर डे विथ आइएमई पे’ अफर अन्तर्गत आइएमई पे एप मार्फत भुक्तानी गर्दा दिनभरीमा १० प्रतिशत छुट (अधिकतम १०० रुपैयाँसम्म) प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो । सबै प्रयोगकर्ताहरुले कुनै पनि क्यूआर पेमेन्ट मार्फत भुक्तानी गर्दा उक्त छुट प्राप्त गर्ने कम्पनीले […]
मुक्तिनाथ विकास बैंक र स्माइल मेकर्स डेन्टल होमबीच सम्झौता, बैंकका ग्राहकहरुलाइ विशेष छुट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले स्माइल मेकर्स डेन्टल होम संग सम्झौता गरेको छ । बैंकले आफ्ना ग्र
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले स्माइल मेकर्स डेन्टल होम संग सम्झौता गरेको छ । बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई २० प्रतिशत सम्म छुट प्रदान गर्ने गरी सम्झौता गरेको हो । बैंकका प्रमुख सूचना अधिकारी तिल बहादुर गुरुङले ललितपुरको गोदावरी स्थित उक्त डेन्टल होमका सेवाहरुमा उक्त छुट प्राप्त गर्ने गरि सम्झौता भएको जानकारी दिएका छन । उक्त सम्झौता […]
वायु सेवा निगमको महाप्रबन्धकमा दीपु ज्वारचन नियुक्त, १३ बर्षको व्यवस्थापकिय अनुभव
काठमाडौं। नेपाल वायु सेवा निगमको महाप्रबन्धकमा दिपु ज्वारचन नियुक्त भएका छन् । बिहीबार संस्कृति
काठमाडौं। नेपाल वायु सेवा निगमको महाप्रबन्धकमा दिपु ज्वारचन नियुक्त भएका छन् । बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ज्वारचनलाई महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेका हुन् । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी निलम्बनमा परिसकेका छन् । रिक्त रहेको उक्त पदमा अब वायुसेवाकै वरिष्ठ पाईलट ज्वारचनले सम्हाल्ने मन्त्रालयले जानकारी दएिको छ । प्रशिक्षक पाइलटको जिम्मेवारीमा […]
आइजीआई र चीरायु अस्पतालबीच सम्झौता, ग्राहकले नगदरहित हस्पिटलाईजेशन सुविधा पाउने
काठमाडौं । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र चिरायु नेशनल अस्पतालबीच सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रम�
काठमाडौं । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र चिरायु नेशनल अस्पतालबीच सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शरण रेग्मी र चिरायु अस्पतालका अपरेशन डाइरेक्टर चन्डेश्वर नन्द राज वैद्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता पश्चात आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडबाट औषधोपचार बीमा सेवा खरिद गर्ने ग्राहकहरुले बीमालेखको सीमा सम्म चिरायु अस्पतालबाट […]
वास्तविक किसानले नपाउने भएपछि कृषिमा अनुदान हटायौं : अर्थमन्त्री शर्मा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकले आर्थिक बर्ष ०७९/८० को बजेटबाट किसानलाई अनुदान दिन�
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकले आर्थिक बर्ष ०७९/८० को बजेटबाट किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम हटाएर प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिएका छन् । विश्व बैंकको प्रबन्ध निर्देशक मारी अल्का पान्जेस्तुसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको एक छलफलमा मन्त्री शर्माले साना किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सके उत्पादन वृद्धि हुन सक्ने देखेर यस्तो नीति लिइएको प्रष्ट पारेका हुन् । ‘गरिब […]
आगामी बर्ष यस्तो सोलार कारले सडकमा तहल्का मच्चाउने छ !
धनुषामा जीप दुर्घटना, ६ जनाको मृत्यु
नारायणगढ–मुग्लिन सडक अाजबाट दिनमा ६ घन्टा बन्द
निगम व्यवस्थापन ‘लुफ्थान्सा’ लाई दिने मन्त्रीको ठाडो आदेश नमान्दा सचिव न्यौपानेको सरुवा, मान्लान त देवकोटाले !
ढुकुटी रित्याउने खेलमा सरकार, कामचलाउ सरकारको गैरजिम्मेवार निर्णय
प्रणय दिवशलाई सवाँ करोडको गुलाफ आयात गरिँदै, मूल्य पनि बढ्ने
शनिबारदेखि मुग्लिन–नारायणगढ सडक दिनभर बन्द, कुन रुटको गाडी कहाँ रोकिन्दैछ ?
यसरी गरियो सांसद पासाङका बुवाको अन्त्येष्टि, बादलदेखि सांसदहरूसम्मको उपस्थिति (फोटोफिचर)
एमएडब्लु अर्थमुभर्स बन्यो जेसीबीको नं १ डिलर,१ बर्षमा ११ सय ४० ओटा निर्माण उपकरण विक्री
कसले लग्यो बाघ गणनामा प्रयोग भएका ६७ क्यामेरा ?
एनआईबिएल क्यापिटलको नि:शुल्क एसएमएस सेवा, सेयर कारोबारबारे जानकारी
भोल्भो सोइल कम्प्याक्टर नेपाली बजारमा, सडक निर्माणमा उत्कृष्ट
रनोको एक्स्चेञ्ज मेला शुरु, तीन मोडलका गाडी सटही सुविधा
अब सबै सेयर ब्रोकर पब्लिक कम्पनी, सर्बसाधारणलाई पनि सेयर !
नेपाल आईडलका उल्सनले सरस्वती माबिमा गरे सरस्वती पुजा
युनिलिभरको साम्राज्य पतन्जलिले हटाउला ?
भारतले घटायो दुई दर्जन बस्तुको कर, नेपालमा सस्तो होला भाउ ?